Rastrabani.com | » पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ‘मास्टर प्लान’ बनाउँदै सरकार पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ‘मास्टर प्लान’ बनाउँदै सरकार – Rastrabani.com
Rastrabani News March 18, 2022
काठमाडौं।कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको उच्च जोखिम अघि काठमाडौँको ठमेलमा पर्यटकको भीडभाड देखिन्थ्यो । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पाइलो हाल्ने ठाउँसमेत हुन्न थियो । काठमाडौँबाट सोलुखुम्बु उडान भर्ने वायुसेवा प्रदायकले नेपाली नागरिकलाई बोक्ने ठाउँ नै हुँदैन थियो ।
होटल, रेष्टुरा र घरबास (होमस्टे) जताततै पुग्ने पर्यटकले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पनि ठूलो योगदान गरेका थिए । तर चैतको खरमा आगो लागे जस्तै एकाएक आएको कोरोनाले धेरैले जीवन तहसनहस बनाइदियो । अर्थतन्त्रको खम्बा नराम्ररी हल्लाइदियो । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सात महिनाको विवरणानुसार विदेशी विनिमय सञ्चिती चालू आवमा मात्रै १७ प्रतिशतले ओरालो लाग्यो । झण्डै दुई वर्षसम्म कोरोनाले थिलथिलो बनाएको सेवा क्षेत्रमा परेको प्रभावले झण्डै सात लाख मानिस बेरोजगार भएको विवरण छ ।
नेपालको पर्यटन तथा त्यसक्षेत्रसँग जोडिएको क्षेत्रमा मात्रै प्रत्यक्षरुपमा रु १० लाख मानिसले रोजगारी पाएका थिए । अप्रत्यक्षरुपमा ३० लाख मानिस यस क्षेत्रमा जोडिएका थिए । कृषि क्षेत्रमा लागेकादेखि यातायात व्यवसायी र वायुसेवा प्रदायकलेसमेत राम्रै रोजगारी पाएका थिए । विसं २०७२ को ‘गोरखा भूकम्प’, भारतको अघोषित नाकाबन्दीलगायतका कारणले समस्यामा परेको पर्यटन क्षेत्रमा एक प्रकारको उभार देखिन थालेको थियो । होटल क्षेत्रमा लगानी बढ्न थालेको थियो । भैरहवा विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायतको भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएको विकासले नेपाल पर्यटनमैत्री बन्दै गरेको सन्देश विश्वव्यापीरुपमा गएको थियो ।
सरकारले पनि सन् २०२० मा मात्रै २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम अगाडि सारेर मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । विप्रेषणमा मात्रै भरपर्ने नेपालको अर्थतन्त्रलाई क्रमशःपर्यटन क्षेत्रले विस्थापन गर्ने र खाडीको तातो घाममा पुगेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजनाले मूर्त रुप पाउनेवाला थियो । आम मानिसमा एकप्रकारको उत्साह थियो । देशभित्रै केही हुँदैछ भन्ने आत्मविश्वास बढ्दै गएको थियो । लगानीकर्ताले सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरिरहेका थिए । कोरोना कहरमै तारे होटलमा भित्रिएको रु १० अर्ब बढीको लगानी त्यसैको द्योतक थियो । तर अदृश्य जिवाणुले ल्याएको कहरले तासको घर जस्तै सबै सपना क्षणभरमै धारासायी बनाइदियो । धेरैलाई घर न घाटको अवस्थामा पु¥याइदियो । काठमाडौँको ठमेलमा व्यवसाय गरिरहेका सटर बन्द गरेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
यो त, कहरको समयको कुरा रह्यो । अब के त ? कसरी अगाडि बढ्ने ? यसै प्रश्नको सेरोफेरोमा आगामी दिनमा यसलाई कसरी पुनःजीवित गर्ने र पर्यटन क्षेत्रबाट पलायन भएका सात लाख बढी मानिसलाई कसरी पेशामा फर्काउने भन्ने प्रश्नबाट उत्तर खोज्नु आवश्यक छ । विदेशी मुद्राको भण्डार घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रमा परेको चापले पनि सरकारको टाउको दुखाइ बढ्दै गएको छ । व्यवसायीमा बढ्दै गएको निरासाको सम्बोधन गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी देखिएको छ । तारे होटल सुनसान बन्दा सायद कोही कसैको मन रमाउँदैन होला । ती होटलमा काम गर्ने मजदुरले पारिश्रमिक नपाउँदा तिनका बालबच्चाले के खाए होलान् भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै छ ।
पर्यटकीय क्षेत्रमा पसल तथा कबल सञ्चालन गर्ने साना व्यवसायीदेखि ठूला व्यापारीसम्मको पीडा एउटै छ । सानाको अलिक सानो होला, ठूलाको पनि उस्तै छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) को एक सदस्य श्रीलङ्कामा पनि कोरोनाले पर्यटकको आवागमन नहुँदा अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । जताततै गुल्जार हुने पर्यटकीय क्षेत्रमा जीवन हराए जस्तो, आशा हराए जस्तो हुनु आफँैमा दुःखद् पाटो बन्न पुगेको छ । अभावले नै मानिसलाई नयाँ सिर्जनाका लागि अभिप्रेरित गर्छ । किनकी, अभाव नै आविस्कारको जननी हो भनेर त्यसै भनिएको छैन । वर्तमान सरकार गठन भएपछि खोप, खोप अनि खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिइयो । त्यसबाट व्यवसायीमा एक प्रकारको आत्मविश्वास पैदा भयो ।
नेपालको संविधान, १५औँ आवधिक योजना र बजेटले मार्गदर्शन गरेबमोजिम नेपालका ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक र प्राकृतिक सम्पदाको पहिचान संरक्षण एवं प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्य राखेर सरकार क्रियाशील छ । पर्यटन क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको आधार रुपमा पर्यावरण अनुुकूल अगाडि बढाउने र समन्यायिक व्यावसायिक लाभको वितरण सरोकारवाला सबैलाई समेटेर अगाडि बढाइएको छ । कोरोनाका कारण सङ्कटमा परेको पर्यटन उद्योगको पुनरुत्थान गर्दै नयाँ सम्भावनाको खोजी, पहिचान तथा प्रवद्र्धन गर्नका लागि यस क्षेत्रमा लगानीको उपयुक्त वातावरण तयार गरी स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने लक्ष्यका साथ पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान निर्देशक समिति गठन गरिएको छ ।
समितिको संयोजकमा भिजिट नेपाल, १९९८ लाई सफल बनाउन लागि पर्नुभएका पर्यटन विज्ञ राजाराम गिरी संयोजक हुनुहहुन्छ । दुई दशकभन्दा बढी समय बेलायतमा रहेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रचार तथा प्रसारमा संलग्न रहनुभएका गिरी करिब कोमामा पुगेको पर्यटन उद्योगलाई पूर्ववत् अवस्थामा नै फर्काएर छाडिने दृढता व्यक्त गर्नुहुन्छ । मन्त्री आले अध्यक्ष रहनुभएको समितिको कार्यादेशमा विशेष गरी चार वटा विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पर्यटन पुनरुत्थान र प्रवद्र्धनका सम्बन्धमा नीतिगत सुझाव प्रदान गर्ने, पर्यटन क्षेत्रको पुनउत्थानका लागि अन्तरनिकाय तथा अन्तर क्षेत्र समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको यथाशीघ्र कार्यान्वयनका विषयमा सुझाव तथा समन्वय गर्ने, पुनरुत्थान प्राविधिक समितिलाई आवश्यक निर्देशक दिने विषयमा समेटिएको छ ।
नेपाल एयरलाइन्सका हाल कायम रहेका अन्तर्राष्ट्रिय उडान व्यवस्थित गर्दै अन्य राष्ट्रमा समेत विस्तार गर्ने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई यथाशीघ्र निर्माण गर्ने, सातवटै प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रम, सीप मुलुक, तालिम प्रदान गरी जनशक्ति उत्पादन गर्न पर्यटकीय विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न योजना तयार गर्ने, नेपालको पर्यटनसम्बन्धी समयसमयमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न आवश्यक गर्न आवश्यक कार्य गर्नेछ । पर्यटन क्षेत्र पुनःचलायमान बन्द हाल पलायन भएका जनशक्तिलाई फिर्ता ल्याउन र नयाँ जनशक्ति भर्नाका लागि पनि तालिमको आवश्यक रहेको संयोजक गिरीको भनाइ छ । “पर्यटन क्षेत्र बन्द हुँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभाव परेको छ । घरेलु बजार आन्तरिक पर्यटनले सामान्यरुपमा धाने पनि त्यसले ठूलो प्रभाव पारेको छैन । यसमा सुधारका लागि सरकार नै लाग्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ हामीले काम गरिरहेका छौँ”, गिरीले भन्नुभयो । सरकारले समिति गठन गरेपनि यो निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यका काम गर्न लागिएको उहाँको भनाइ छ ।
संयोजक गिरीका अनुसार नेपाल, भारत, बेलायत, अमेरिकालगायत विभिन्न देशका सेलिबे्रटीलाई नेपालको पर्यटकीय क्षेत्रका प्रचार प्रसारका लागि आग्रह गरिनेछ । त्यसका लागि विशेष भ्रमण प्याकेजसमेत तयार पारिनेछ । सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सेलिब्रेटीलाई प्रचारप्रसारका लागि अनुरोध गर्ने तयारी छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको बारेमा जानकारी दिनका लागि साना श्रव्यदृश्य सामग्री बनाइनेछ । विदेशी सञ्चारमाध्यममा समेत वृत्तचित्र बनाएर प्रचार गरिने संयोजक गिरीको भनाइ छ । चलचित्र, विभिन्न खेलकुदमा प्रख्याति पाएका कलाकारलाई नेपालको पर्यटन क्षेत्रको प्रचार तथा प्रसारका लागि सहभागी गराइनेछ ।